Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin- မြဟံသာ သန်လျင်မြို့ - Download Facebook Videos - BajarFB.com
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin- မြဟံသာ သန်လျင်မြို့
FB URL: https://www.facebook.com/myahantharcinema/
⭕️လူဘ၀မှကုသိုလ်ထူးပြီးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ အန္တရာယ်တစ်ခုကြောင့်........ အခြားဘုံဘ၀သို့ရောက်ရှိပြီး ၀ိညာဉ်ဘ၀က သူရောင်မယ်လေးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ပါကုသိုလ်ကံ အရမ်းကောင်းလွန်းတော့ ⭕️လူဘ၀မှာ တခါ ⭕️၀ိညာဉ်ဘ၀မှာတခါ မင်္ဂလာထပ်ဆောင်ရတဲ့အဖြစ်ကို 🎥#နှစ်မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မှာ ဘယ်လိုတွေတောင် ရိုက်ကူးထားလည်းဆိုတာကို 😂🤣တ၀ါးဝါး 😂တဟားဟားနဲ့ကြည့်ရှုရမှာနော်……… #နှစ်မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ကို# ️ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ ) တွင်စပြီးရုံတင် ပြသနေပါပြီနော် လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
🎥မင်္ဂလာဦးည🎥 ၂၉.၃.၂၀၁၉ မှာ အလှည့်ကျတဲ့ မင်္ဂလာဦးည ကတော့🍎🍎 ပုရိသကိုကိုတို့အကြိုက်နော်😍😍😍😍 ကတ္ထိယ မမ တို့လည်းအလန်းတွေနဲ့ အကန်တွေကြည့်ရမှာနော်❤️❤️❤️ ရုံတင်မယ့်ရက်ကသင်္ကြန်မလာခင်လေးဆိုတော့ ငပလီကမ်းခြေရဲ့ အငွေ့အသက်လေးနဲ့သင်္ကြန်အရသာလေးခံစားကာပျာ်ပျော်ပါးပါး လာရောက် ဟားကြတော့နော်👄👄 Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ ၂၉.၃.၂၀၁၉မှစပြီးပြသနေပြီဖြစ်ပါတယ် လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
🎬ဒယ်ဒီဖားကင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး 🎬 💢တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆေးထိုးကြမ်းတဲ့နေရာမှာ....💢 👨‍🔬👨‍🔬ဆရာဝန်တောင်အရှုံးပေးရတယ်ဟေ့.... 👦👨တက်လူနဲ့ရွှေထူးကဘဲဆေးထိုးကြမ်းမလား....❓❓ 🐸ဒယ်ဒီဖားကင်ကဘဲဆေးထိုးကြမ်းမလားဆိုတာ...❓❓ ❤️ချစ်ပရိသတ်တွေ...... 😂တဝါးဝါးတဟားဟားနဲ့ရီမောပျော်ရွှင်သွားစေမယ့် #🎥ဒယ်ဒီဖားကင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး🎥 💥💥မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့မှစတင်၍Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
🎞လှတောသားနဲ့ယောက္ခမလောင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး🎞 💥လှတောသားလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့... ပြေးမြင်မိတာကတော့ စကားပြောတဲ့နေရာမှာ..... နှစ်ယောက်မရှိအောင် အပြောကြွယ်တဲ့သူဆိုတာပါပဲ.... ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လှတောသား/သူတွေရဲ့.... ဓလေ့ထုံးစံကို ကျေးလက်သဘာဝကျကျ ဟာသမြောက်အောင် ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့.....💥 #လှတောသားနဲ့ယောက္ခမလောင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး 💥💥မတ်လ (၈)ရက်နေတွင် Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
💢 ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ဘီလူး 💢 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး 👹👹👹 ဒီနယ်တကြောမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘီလူးကြီး တာနောဆိုတာ သိပြီးပြီလား… 💢💢💢 နာမည်ကြီးဆို ရင်ဘတ်က ဘီလူးရုပ်ကိုက👹 သချိင်္ုင်းမှာ ပွဲပေးပြီး ထိုးထားတာ… လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုက ဗျစ်ရည်ဆိုင်မှာ စကျူရတီလုပ်တာ… 😎 📣 ဘီလူးက ဟိတ်ဆိုတာနဲ့ ဆိုင်ရှင်ကအစ တိတ်ပြီးသား…🤐 မတိတ်ရင် ပုလင်းတွေ ကုန်မှာစိုးလို့… 🤣🤣🤣 တစ်လောကလုံးမှာလည်း ဘီလူးကြောက်တာဆိုလို့ သရဲပဲ ရှိတာ… 👻👻👻 အလကားနောက်တာ…🤫 ✨တာနောနော်✨ ညာမပြောဘူး… ✨ ဘီလူးထဲမှာ ဂယက်အထဆုံး ဘီလူး… ☝🏻☝🏻☝🏻 ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ဖောက်မယ့် ဘီလူးအစွမ်းကြောင့် တစ်ရုံလုံး ရယ်သံတွေ လွှမ်းသွားပြီး အူပါတက်သွားရင်🤣🤣🤣 တာနော အဆိုးမဆိုနဲ့နော်🙄 ကဲ...(၈.၃.၂၀၁၉) 💢 ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ဘီလူး 💢 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအား Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
💥မင်းနဲ့စ တွေ့တဲ့ အချိန်မှစ မင်းအကြောင့်စဉ်းစားရင် ...... ‼️ငါ့ရင်တွေခုန်းလွန်းလို့ မနည်းဖိထားရတယ်....... ❤️အဒါအချစ်လား...??? တကယ်တော့.....လူမိုက်ကြီးမှာ လဲ နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားရှိပါတယ်.... ❤️ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ..... 👤လူသားတိုင်အတွက်.. အချစ်က နူးညံစေတာလားဆိုတာ.... 🎥Hero ဟီးရိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး🎥 ကို (၂၂.၂.၂၀၁၉) ရက်နေမှစ၍ Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
ဒါရိုက်တာ အောင်ဗပါဝါ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားပြီး 🤵🏻အကယ်ဒမီ ရန်အောင်🤵🏻 🕵🏻အကယ်ဒမီ ရဲအောင်🕵🏻 🤴🏻🤵🏻အားသစ်🤵🏻🤴🏻 အိချောပို👰🏻👸🏻 နေဆန်း 👩🏼‍🏫အကယ်ဒမီ မို့မို့မြင့်အောင်👩🏼‍🏫နဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်အားဖြည့်ထားတဲ့ 💥ဝမ်းဝမ်းလေး💥 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ၁၅.၂.၁၉ ရက်မှ စ၍ Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ ပြသနေပါပြီနော် လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
💓မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများက ဖြိုးကျော်ကိုသနားကြတယ်... ဖြိုးကျော် ဖွင့်မပြောတာကိုလည်း မချိတင်ကဲဖြစ်ကြတယ်... ဖြိုးကျော် တင်တင်ဇော်ကိုချစ်နိုင်တာကြည့်ပြီးအားကျကြလိမ့်မယ်... ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ မိန်းကလေးတွေမလွန်ဆန်နိုင်ဘဲသဘောကျနှစ်သက်တာက နန္ဒလိုပိုင်ဆိုးပိုင်နင်းနဲ့ဇွတ်တရွတ်ဆန်တဲ့ချစ်သူမျိုးဆိုတာ ငြင်းလို့မရပြန်ဘူး.... ဟုတ်လားဟင်❓ သင်တို့ကော ဘယ်သူ့ကိုသဘောကျလဲ❓ ♻️ နန္ဒလား ❓ ♻️ ဖြိုးကျော်လား ❓ 🌸 ကြာတော့သည်လည်းမောင့်စကား🌸 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး 🎬🎬🎬 Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ ၁.၂.၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) မှ စပြီး ပြသနေပါပြီနော် လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀မှာ လွဲခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရအလွဲတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ? 🤔🙄 အမှတ်တရလေးတွေပြန်တွေးရင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးတော်ကြီးနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းတွေ ဆရာ /ဆရာမတွေကို အလွမ်းပြေ အဓိပတိလမ်းကနဂ္ဂတစ်များ ကြည့်လို့ရပါတယ်နော် 🥰🥰 #အဓိပတိလမ်းကနဂ္ဂတစ်များ #ဆရာနီကိုရဲ_ကြည်ပြာရောင်နဂ္ဂတစ်များ #ပြေတီဦး #ဝတ်မှုံရွှေရည် #နောက်တစ်ပတ်သောကြာ ( ဇန်နဝါရီ ၂၅ ) ဆိုရင် Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ စပြီး ပြသနေပါပြီနော် လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
🎥လေးပါကျော့ရှိန်ဝရဇိန် 🎥 🔴ဖြူစင်သောမေတ္တာတရား 🔴စစ်မှန်သောသူငယ်ချင်း 🔴ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘ၀တွေ ပါဝင်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမရိုက်ဘူးသေးတဲ့ ကမ်းခြေနှစ်ဖက်ရှိသည့်မြန်မာပြည်၏ တစ်ခုတည်းသောကမ်းခြေ ဂေါ်ရမ်ဂျီကျွန်းအလှအပတွေကို သဘာဝကျတဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်များဖြင့် ဖန်တီးထားတဲ့ #လေးပါးကျော့ရှိန်ဝရဇိန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ ၂၅.၁.၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) မှ စပြီး ပြသနေပါပြီနော် လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်တော့မယ့် ထာဝရထက်နှစ်ဆ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း ထက်မြက်နိုင်ဇင် ရေးသားပြီး ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ ညွန့်မြန်မာညီညီအောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ "ထာဝရထက်နှစ်ဆ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပရိသတ် အချစ်တော် မြင့်မြတ်၊ ရွှေမှုန်ရတီ နဲ့ မင်းမော်ကွန်းတို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုဇာတ်ကားမျိုး ဖြစ်မယ်လို့ ပရိသတ်တွေ ထင်လဲ ခင်ဗျ။ Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ ) ပရိသတ်ကြီးရေ ၁၈.၁.၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) မှ စပြီး ပြသနေပါပြီနော် လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
ဒုစရိုက်​​လောကထိပ်​သီးလူမိုက်​ကြီးနဲ့ သိုင်းပညာမှာတစ်​ရွာလုံးဆရာတင်​ထားတဲ့ သိုင်းအ​ကျော်​အ​မော်​တို့ လက်ဝှေ့စင်​​ပေါ်မှာ ထိပ်​တိုက်​ရင်​ဆိုင်​ကြသောအခါ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 မြင့်​မြတ်​ (ဂျင်း​ကောင်​) ရဲ့ သူမတူတဲ့ဟာသစွမ်းရည်​​တွေကို မမြင်​ရတာကြာပြီဖြစ်​တဲ့ ပရိသတ်​ကြီးအတွက်​ ​ရုပ်​ရှင်​​တွေထဲမှာ ​တွေ့မြင်​ရ​လေ့မရှိတဲ့ ကရင်​ပြည်​နယ်​အလှအပကိုခံစားရင်း တ၀ါးဝါးတဟားဟားရီ​မောရင်း ဘ၀အ​မော​တွေ​ပြေ​စေမယ့်​ ​ဟောက်​စားရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကြီးကို ဇန်​န၀ါရီ (၁၁) ရက်​​နေ့ ရုံတင်​ပြသပါပြီ။ ဟောက်စား 🔥 ဒါရိုက်တာ - ပြည်ဟိန်းသီဟ ဇာတ်လမ်း - နတ်စောင်း ဇာတ်ညွှန်း - သက်ဦးမောင် မြင့်မြတ် ကျော်ကျော်ဗိုလ် အိချောပို ခင်လှိုင် ဂျိုကာ k ညီ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ နှင့် အနှပညာရှင်ပေါင်းများစွာ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
မင်္ဂလာပါ Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ ) 2019 ဇန်နဝါရီ4ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ စတင်ပြသတော့မဲ့ ယမမင်းနှင့်လပ်ကီးမန်း ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဇာတ်လမ်း-စတီးလ် ဇာတ်ညွှန်း-နေစိုးသော် ဒါရိုက်တာ-ကိုဇော်(အာရုံဏ်ဦး) သရုပ်ဆောင်-ဇေရဲထက် ရွှေမူံရတီ ရန်အောင် စိုးမြတ်သူဇာ ဗေလုဝနှင့် အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွားပါဝင်ထားသည့် ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို လာရောက်အားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်. . . ;-) ;-) Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ ) ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
သတို့သမီးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်က... ဘာလို့သင်ထင်လဲ ? နာကျည်းချက်လား.. ? ရန်ငြှိုးလား... ? အမုန်းလား.. ? ဂလဲ့စားလား ...? ဒီဇင်ဘာ ( ၂၈ )ရက်နေ့မှစပြီး Mya Han Thar cinemaမှာ ရုံတင်ပြသပါပြီ ... ❣ ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
ရဲ​ထွေး ​ဒေးဗစ်​ သုတ ဆိုတဲ့​ကျောင်းသားသုံး​ယောက်​ရှိတယ်​... 🙇🙇🙇 သုံး​ယောက်​လုံးကင​ကြောက်​​တွေ ... လူ​ကောင်​ကလဲ ​သေး​လေ​တော့ ​ကျောင်းကဗလ​တောင့်​​တောင့်​နဲ့ နွားကြီးတို့အဖွဲ့ရဲ့ အမြဲလိုလိုအနိုင်​ကျင့်​ခံ​နေရတဲ့ င​ကြောက်​​လေး​တွေဆိုပါ​တော့ 💥💥 အမြဲလိုလိုကံမ​ကောင်း​လေ့ရှိတဲ့ ​ဒေး​ဗစ်​ရဲ့ ကျိန်​ဆဲမှု​ကြောင့်​ ​ဒေးဗစ်​ကိုမ​စောင့်​​ရှောက်​ပဲ အမြဲလိုလိုဖွန်​ပဲ​ကြောင်​​နေတဲ့ ကိုယ်​​စောင့်​နတ်​ဆိုသူကြီး ​ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ​တော့....... 💥💥 ဘာ​တွေဆက်​ဖြစ်​မှာလဲ သိချင်​သွားပြီမလား ? 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 🍭 ကိုယ်စောင့်နတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ကျော်သူ ရန်အောင် ရဲအောင် ထွန်းထွန်း လွှမ်းပိုင် ထူးအောင် ဆန်းထွဋ် အောင်ရဲထွေး သုတဇော်​ မျိုး​ဇော်​ ခင်ဝင့်ဝါ မေသဉ္ဇာဦး ခိုင်သဇင်ငုဝါ ချောကလျာ စူးရှခင်​ နန်းချစ်​ခွန်းချို ကင်း​ကောင်​ ဇင်​မျိုး တက္ကသိုလ်​ဂွမ်းပုံ ဧည့်​သည်​သရုပ်​​ဆောင်​ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ ​ခေးဆက်​သွင်​ မျိုးလှိုင်​ဝင်း(မြန်မာလက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားဟောင်း ) 💢 ဒါရိုက်တာ ဝင်းလွင်ထက် Produced by Myanmar Media7Film Production 🔹🔹🔹 ၂၈ရက်နေ့(သောကြာနေ့)မှစတင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်..